July 25, 2020 4191
बुधवार निध’न भएका महानायक राजेश हमालका भाई राकेशको श’व काठमाडौ ल्याइएको छ । उनको शुक्रवार काठमाडौं स्थित पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्का’र गरिएको छ । दाहसंस्का’रमा हमालका परिवार र शुभचिन्तकहरु सहभागी भएका थिए ।
त्यस अलावा केही चलचि’त्रकर्मी र नेपाली कांग्रेस’का नेता सहभागी भएका थिए । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सकृय राकेशलाई अन्तिम श्रद्धाञ्ज’ली दिन नेपाली कांग्रेसका नेता सशांक कोइराला, सुजाता कोइराला लगायतका नेता पुगेका थिए ।
राकेशले पार्टीका लागि खेले’को भूमिका सम्झदै नेता कोइरालाले हमाललाइ पार्टीको झण्डा ओढाएका थिए । महानायक हमालको एक मात्र भाइको नि’धन भएका कारण अहिले शो’कमा छन् । भारतमा उपचारार्थ रहेका भाई राकेश हमालको बुधवार निध’न भएको हो ।
गएको बुधवार निध’न भएका भाईलाई सम्झदै महानायक राजेशले सामाजिक सञ्जालमा निकै भा’वुक स्टाटस समेत लेखेका थिए । उनले विहिवार भाईसंग विताएका तस्बिर सार्वजनिक गर्दै स्टा’टस लेखेका छन् । विहिवार तस्बिर र स्सटाटस लेख्दै उनले भाईलाई सम्झेका हुन् ।
राजेशका भाई कलेजोका रो’गी थिए । उनको भारतमा उपचार भै रहेको थियो । नयाँ दिल्लीस्थित ह्याम्स अस्पतालमा उपचारका क्रममा राकेशको नि’धन भएको हमाल परिवारले जानकारी दिएको छ ।
राके’शलाई केही दिनअघि प्लेन चार्टर्ड गरेर दिल्ली पुर्‍याइएको थियो । दिवंगत राकेशका श्रीमती र दुई छोराछोरी छन् । अभिनेता राजेशका एकमात्र रहेका भाइ राकेशको नि’धन भएसँगै हमाल परिवार शो’कमा परेको छ । अभिनेता राजेश तीन दिदीबहिनी छन् ।
Prevआज साउन १० गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस्….
Nextटिका सानुको आँखामा आँशु, रविलाई हात जोड्दै यसो भनिन् (भिडियो सहित)
आजको डलरको भाउ सहित अन्य देशको मुद्राको भाउ हेर्नुहोस्:
यस्तो पनि हुन्छ र? मध्य,-राति खनियो ६ वर्ष अघिको चिहान, झाक्रीले गरे यस्तो खुला’सा (भिडियोसहित)